Fanohanan’ny Amerikanina: olona 323 000 hahazo 200 000 Ar hividianana sakafo | NewsMada
Fanohanan’ny Amerikanina: olona 323 000 hahazo 200 000 Ar hividianana sakafo
Nanolotra vola 5 tapitrisa dolara ny governemanta amerikana tamin’ny alalan’ny masoivoho amerikana ho amin’ny fampandrosoana iraisam-pirenena hanohanana ny fandaharanasa fandefasana vola.
Hanampy ireo fianakaviana marefo eto an-dRenivohitra ahafahany hanana sakafo ampy manoloana ny tranga Covid-19 ny tanjona, araka ny fanazavana azo, omaly. Misahana ny tetikasa ny BNGRC sy ny minisiteran’ny Mponina satria paikady novolavolain’ny fanjakana malagasy ny fandaharanasa fa manohana ny vondrona mpiara-miombona antoka iraisam-pirenena. Ny Fandaharanasan’ny Firenena mikambana momba ny sakafo (Pam) no mitantana sy mizara io fanampiana amerikana io, hamaly ny filana sakafon’ny olona miisa 323 000. Hahazo ny fanampiana ny tanànan’Antananarivo, i Fianarantsoa, i Toamasina, i Moramanga, i Taolagnaro ary i Manakara. Hahazo vola 100 000Ar isam-bolana mandritra ny roa volana ny fianakaviana tsirairay.
“Maniry ny hanohana sakafo ireo fianakaviana marefo sy sahirana sy hanome tosika ireo orinasa eo an-toerana izahay”, hoy ny masoivoho amerikanina, i Michael P. Pelletier. Afaka hividy sakafo sy ireo zavatra ilaina amin’ny andavanandro eny amin’ireo tsenam-pokontany ireo fianakaviana ireo, ary hanohana ny orinasa eny an-toerana sy ny toekarena izany.
Manoloana ny fivoaran’ny valanaretina, nandray fepetra hihiboka ho fitsinjovana ny fahasalaman’ny daholobe ny any amin’ny faritra maro. Nisy fiantraikany sosialy sy toekarena amin’ireo tokantrano sahirana eto an-dRenivohitra tsy manana fidiram-bola raikitra izany satria noferana ny fivezivezena.
“Ho laharam-pahamehana amin’ny fandaharanasa ny ahafahan’ireo olona miasa amin’ny sehatra tsy manara-drafitra sy ireo fianakaviana manana ankizy sy zokiolona ary sembana mividy zavatra”, hoy ny talen’ny Pam, i Moumini Ouedraogo.
Ankoatra ny fanampiana, omaly, efa nanome vola mitentina 2,5 tapitrisa dolara koa ny Amerikanina hanohanana ireo hetsika vonjitaitra ara-pahasalamana. Misy 2,2 tapitrisa dolara fanampiny ho fanohanana ireo tetikasan’ny USAID manodidina ny fahasalamana.